पर्यटक आगमन झिनो संख्यामा वृद्धि, २०१९ मा भित्रिए ११ लाख ९७ हजार – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार २३:०७ English
पर्यटक आगमन झिनो संख्यामा वृद्धि, २०१९ मा भित्रिए ११ लाख ९७ हजार
निरोज कुमार थाप, काठमाडौँ, १२ माघ । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो संख्या सन् २०१८ को तुलनामा २.०५ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यका साथ मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ का यो शुभ संकेत नभएको पर्यटन विद्हरुको बुझाई छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डले १५ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्ने दाबी गरेपनि उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झिनो संख्यामा मात्रै पर्यटक आगमन बढेपछि भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउन थप कठिनाई देखिएको हो ।
वर्ष २०१९ मा आएका पर्यटकको संख्या हेर्दा पर्यटन रणनीति २०१६–२०२५, भिजन २०२० र नेपाल वर्ष भ्रमण २०२० ले अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटन बजार विस्तार हुन नसकेको जानकारहरुको बुझाई छ ।
१२ माघ २०७६, आईतवार ०९:४५ मा प्रकाशित
काँग्रेसको छाँया मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्यो, के के भए निर्णय ?	११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १३:३७
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः ३४ जना प्रतिवादीका नाममा उपस्थित हुन म्याद जारी	११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १२:४७
प्रचण्डले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई पार्टीले छुट दिँदैन’	१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १५:४२
महाशिवरात्रीमा पशुपतिः चारै ढोका खोलिए, लाखौ भक्तजनको लाइन	९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:३१